Hababka Dib -u -dejinta ee UNHCR inta lagu jiro Xayiraadaha COVID-19 | Refugee Malaysia
Hababka Dib -u -dejinta ee UNHCR inta lagu jiro Xayiraadaha COVID-19
Monday / 20 September 2021
Sababo la xiriira tillaabooyinka lagu joojinayo faafitaanka Covid-19, oo ay ku jiraan xannibaadaha safarka, ka shaqeynta dib-u-dejinta iyo bixitaanka ayaa si xun u saameeyay adduunka oo dhan, oo ay ku jirto Malaysia.
Iyada oo laga jawaabayo Awaamiirta Xakamaynta Dhaqdhaqaaqa iyo talooyinka caafimaadka dadweynaha ee ay bixiso Dowladda Malaysia, adeegyada UNHCR badankood, oo ay ku jiraan dib -u -dejinta, waxaa lagu sameeyaa meel fog (taleefan ama wicitaan fiidyow) si loo ilaaliyo caafimaadka qaxootiga iyo sidoo kale shaqaalaha UNHCR.
Safarrada caalamiga ah waxaa si weyn u saameeyay COVID-19, oo saameeyay bixitaankii qaxootiga la aqbalay, oo ay ku jiraan kuwa Malaysia jooga.
In kasta oo isbeddeladani ay keeneen wareysiyo fog, haddana u -qalmitaanka dib -u -dejinta iyo habraacyadu waa isku mid.
Dib -u -dejintu ma aha xaq. Diiwaangelinta iyo/ ama bixinta xaaladda qaxootinimo ee UNHCR micnaheedu ma aha in shaqsi loo diri doono dib u dejin.
Dib -u -dejinta ayaa weli ah aalad ilaalinaysa qaxootiga aadka u nugul. Aqoonsashada kiisaska dib -u -dejinta ee suurtagalka ah ayaa sii ahaan doona mid ku salaysan baahida badbaadinta shaqsiga.
Soo gudbinta kiiska dib -u -dejinta ayaa ku xiran arrimo badan, oo ay ku jirto darnaanta baahiyaha ilaalinta shakhsiga, deegaanka ilaalinta, mawqifka dalka martida loo yahay, iyo helitaanka meelaynta dib -u -dejinta.
Haddii kiiskaaga si hordhac ah loogu aqoonsaday dib -u -dejin, Waaxda ​Xalalka ​waara (DSU) ayaa laga yaabaa inay kula soo xiriirto taleefanka haddii loo baahdo macluumaad dheeri ah si loo dhammaystiro qiimeynta u -qalmitaanka ka -shaqeynta dib -u -dejinta.
Wareysiga Dib -u -dejinta
Haddii kiiskaaga la arko inuu u qalmo habaynta dib -u -dejinta, waxaa laguugu yeeri doonaa waraysi fog. In principle, all interviews take place online or via telephone except for very exceptional circumstances that require an onsite interview at UNHCR, COVID permitting. Inta lagu jiro wadahadalkaan, waxaad ogeysiin kartaa waaxda Xallaka waara haddii aadan rabin inaad sii waddo wareysi fog. Ma saamayn doonto natiijada tixgelinta UNHCR ee kiiskaaga dib -u -dejinta. Si kastaba ha noqotee, waxay sababi kartaa dib u dhac, sida fool-ka-fool ah wareysiyada waxaa dib loo bilaabi karaa oo kaliya marka xafiiska UNHCR dib loo furo.
Inta lagu jiro wareysiga dib -u -dejinta fog, xubin ka tirsan shaqaalaha UNHCR ayaa ku siin doona warbixin ku saabsan ujeeddada wicitaanka iyo dulmarka habka dib -u -dejinta. Isaga/ iyada ayaa sidoo kale hubin doona haddii aad ku sugan tahay meel ammaan ah oo asturnaantaada iyo sirtaada la ilaaliyo. Hagitaan ayaa la siin doonaa haddii ay jirto baahi loo qabo inaad u gudbiso UNHCR dukumentiyadaada.
Fadlan ha duubin codkaaga ama fiidiyahaaga wareysiga dib -u -dejinta fog. Tani waxay noqon doontaa jebinta qarsoodinimada waxaana si dhab ah u eegi doonta UNHCR .
Kadib Wareysiga Dib -u -dejinta oo ay kula yeelatay UNHCR
Waraysiga dib -u -dejinta ka dib, kiiskaaga si taxaddar leh ayaa loo eegi doonaa waxaana go’aan laga gaari doonaa haddii loo gudbin doono waddanka dib -u -dejinta si ay u tixgeliyaan.
Haddii aad hore u martay waraysi dib -u -dejin UNHCR oo aad qabtid su’aalo ama aad rabto inaad cusboonaysiiso macluumaadka, tusaale ahaan. isbedelada Halabuurka qoyska / duruufaha jira, fadlan iimayl ugu soo dir mlsludsu@unhcr.org
Haddii kiiskaaga loo soo gudbiyo dib -u -dejin, ama Waaxda Xalalka waara ama waddanka dib -u -dejinta ayaa kula soo xiriiri doona si ay kuugu siiyaan macluumaad ku saabsan kiiskaaga dib -u -dejinta.
Waa waddamada dib -u -dejinta kuwa aakhirka go’aamiya in dib -u -dejin la siiyo iyo in kale si waafaqsan xeerarkooda iyo sharciyadooda.
Haddii aan lagaala soo xiriirin 6 bilood kadib wareysigaagii dib-u-dejinta, fadlan iimayl ugu soo dir mlsludsu@unhcr.org. mlsludsu@unhcr.org. Given the large volume of emails received, UNHCR is not able to individually respond to all queries. Fadlan ha u dirin weydiin marar badan UNHCR. Waxay dib u dhigi doontaa socodsiinta ka jawaabista.
Haddii Kiiskaaga Loo Gudbiyey Maraykanka ama Kanada
Haddii kiiskaaga loo gudbiyey Mareykanka, waxaad ka hubin kartaa xaaladdaada Xarunta Taageerada Dib-u-dejinta (RSC) iimayl ahaan (KL.Inquiries@rescue.org), taleefan (+603 2141 5846), fakis (+603 2144 8716) ama boggooda shabakadda, CASI.
Haddii kiiskaaga loo gudbiyay Kanada, waxaad fiirin kartaa xaaladdaada kiiska adiga oo isticmaalaya foomka shabakadda Socdaalka, Qaxootiga iyo Dhalashada Kanada..
Diyaargarowga Bixitaanka Hore iyo Socdaalka Dalka Dib-u-dejinta
Dalal badan ayaa sii wada xayiraadaha safarka si loo xaddido gelitaanka dadka aan u dhalan dalka sababo la xiriira Cudurka aafada ah. Sidoo kale, tallaabooyin baaritaan caafimaad oo dheeri ah oo la xiriira gelitaanka ayaa waddamadu dejiyeen si loo maareeyo halista faafitaanka COVID-19. Iyadoo tiro yar oo qaxooti ah oo la aqbalay ay awood u yeesheen inay u safraan dalalka dib -u -dejinta, hadda waxaa jira dib -u -dhac dheer oo socdaal adduunka oo dhan. Dalalka dib -u -dejinta ayaa weli ka go’an soo dhaweynta qaxootiga waxaana la filayaa in safarada caalamiga ah ay si tartiib tartiib ah dib ugu bilaaban doonaan marka cabuqo yaraado.
Ururka Caalamiga ah ee Socdaalka (IOM) ayaa qabanqaabiya diyaarinta lagama maarmaanka u ah ka hor bixitaanka, oo ay ku jiraan baaritaanka caafimaadka iyo diyaarinta dhaqanka, iyo sidoo kale diyaarinta safarka qaxootiga la aqbalay ee dalka dib u dejinta. Haddii uu ku aqbalay waddan dib -u -dejin ah, IOM ayaa kula soo xiriiri doonta marka tilmaamaha safarka la diyaariyo. IHaddii laguu oggolaaday dib -u -dejin oo aad wax su’aal ah ka qabto qabanqaabadaada safarka kahor ama safarka, waxaad kala xiriiri kartaa IOM Kuala Lumpur iomkulinq@iom.int ama wac +603 923 5540.
Fadlan U Sheeg UNHCR Haddii Aad Beddesho Lambarka Taleefankaaga ama Cinwaankaaga
Ha ilaawin inaad u sheegto UNHCR markaad beddel lambarka taleefankaaga gacanta ama cinwaankaaga. Waxay u saamaxaysaa UNHCR inay ku soo gaadho marka loo baahdo iyo inay ka shaqayso gudbinta iyadoon dib u dhac kale dhicin.
MUHIIM: Dhammaan Adeegyada UNHCR waa Lacag La’aan.
Ha aaminin qof ama urur ku weydiinaya inaad lacag ka bixiso adeegyada iyo gargaarka ay bixiso UNHCR ama la -hawlgalayaasheeda, oo ay ku jirto dib -u -dejinta. Haddii lagu waydiiyo lacag aama wax kale oo macruuf ah, oo ay kujiraan kuwa ay ku dheehantahay jinsiga, badelka adeegyada UNHCR. fadlan isla markiiba u soo sheeg UNHCR.
UNHCR Kuala Lumpur: mlslufrd@unhcr.org
Xafiiska Kormeeraha Guud (IGO): inspecgtor@unhcr.org
Ama ku rid cabashadaada gudaha Sanduuqa emaylka cas Albaabka B ee Xafiiska UNHCR.
Dhammaan warbixinnada/cabashooyinka waxaa loola dhaqmi doonaa si qarsoodi ah. Waxa kale oo aad gujin kartaa halkan si aad u gudbiso cabasho onlayn ah (khiyaano iyo musuqmaasuq).
← Previous notice Next notice →